konke odinga ukukwazi malunga ne-usb 3.1, i-usb type-c isinxibelelanisi, kunye nokuhanjiswa kwamandla kwe-usb
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-USB 3.1, isinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB, kunye noNikezelo lwaMandla lwe-USB
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-USB 3.1, isinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB, kunye noNikezelo lwaMandla lwe-USB
Imbalwa imigangatho yetekhnoloji eyaziwa ngokuba ikuyo yonke indawo njenge-Universal Serial Bus, eyaziwa njenge-USB. Phantse amashumi amabini eminyaka, ibisenza umsebenzi omkhulu wokudibanisa izixhobo zethu komnye nomnye, ebavumela ukuba bathumele idatha ngapha nangapha ngokukhawuleza, kwaye ngamanye amaxesha ngokukhawuleza okukhulu, isantya. Kodwa ngaphandle kokuthandwa okuqhelekileyo, abaphulaphuli ngokubanzi ababonakali ngathi baziqhelanise neenkcazo zayo zamva nje. Ewe, thina & apos; silapha ukulungisa oko. Nantsi iapos yonke into ofuna ukuyazi malunga ne-USB 3.1, i-USB Type-C, kunye nokuhanjiswa kwamandla kwi-USB.
I-USB 3.1 kunye nohlobo C lwe-USB aziyonto inye
Siye saqaphela ukuba amagama athi i-USB 3.1 kunye nohlobo C lwe-USB ngamanye amaxesha asetyenziswa ngokungafaniyo, nto leyo esikhokelela ekubeni sikholelwe ukuba umahluko phakathi kwezi zinto zimbini awucacanga ngokwaneleyo. Ukubeka ngokulula, i-USB ngumgangatho womzi mveliso kwaye i-3.1 linombolo yayo yohlaziyo. Itekhnoloji, ayisiyonto ebonakalayo. Uhlobo-C, nangona kunjalo, luhlobo nje olutsha lwesinxibelelanisi. Iqukethe iplagi yohlobo C kunye nesamkelo sohlobo C.
Kubalulekile ukuba uyazi ukuba ngelixa i-USB Type-C yenzelwe ukuphatha imiqondiso ye-USB 3.1, isixhobo esisebenzisa ikhonkco asinyanzelekanga ukuba sihambelane ne-USB 3.1. Ithebhulethi yeNokia N1, umzekelo, sisixhobo se-USB 2.0 nangona isebenzisa isinxibelelanisi sohlobo C. Kuyafana nakwiselfowuni ye-OnePlus 2. Kwangelo xesha, kunokwenzeka ukuba isixhobo sisebenzise isixhobo se-USB 3.0 sohlobo lwe-A - eso siluhlaza okwesibhakabhaka osifumana kwiilaptops zangoku nakwiikhompyuter zedesktop- kwaye usengayo i-USB 3.1 iyahambelana
Ke, zithini inqaku? Kutheni kukho izixhobo ezisebenzisa i-USB Type-C nangona zingahambelani ne-USB 3.1? Impendulo ilula-ilula.
Uhlobo lwe-C lwe-USB lubuyela umva, lomelele, kunye nonyawo oluncinci
Uhlobo lwe-C lwe-USB sisixhobo sokunxibelelana esinokubuyela umva Senze zonke iintambo ze-USB kunye needrive ze-USB. Sonke siyalwazi unxunguphalo lokuba lungalingani ngenxa yokuba sizamile ukuyiplagi ngendlela engalunganga. Uhlobo lwe-C lwe-USB, nangona kunjalo, luyikhathalele loo ngxaki kunye nokubuyiselwa umva. Ngamanye amagama, unokufaka iplagi yohlobo-C kwizibuko lohlobo-C nangayiphi na indlela kwaye isaza kusebenza nokuba luhlobo luni loqhagamshelo lwe-USB- 3.1, 3.0, okanye 2.0.
Konke oku kungena nokuphuma akuyi kusidala ngokulula isixhobo sokudibanisa. Uhlobo lwe-C luyilelwe ukunyamezela ngaphandle kwemijikelezo yokufaka / yokutsala engaphantsi kwe-10,000, ebeka ngokuhambelana nezihlanganisi ze-USB ezincinci zanamhlanje. Akukho nto ibaluleke kangako, i-USB Type-C yenziwa ukuba ihlale indawo encinci kwibhodi yesekethe. Ezi ziindaba ezimnandi zabaqulunqi behardware njengoko baya kuba negumbi elixabisekileyo ngaphakathi kwizixhobo zombane abazakhayo.
Uhlobo-C luya kulawula phakathi kwezihlanganisi ze-USB
Uhlobo lwe-C kwizibuko le-Chromebook Pixel Oko siye sagqitha kumhlathi odlulileyo zezinye zeenzuzo ezininzi zohlobo C lwe-USB ngaphezulu kwezihlanganisi ezikhoyo ze-USB. Ukongeza kwezi, iplagi entsha kunye nesamkeli sinokuthwala uqhagamshelo lwe-USB 3.1, ukuhambisa imiqondiso ye-DisplayPort ukuya kuthi ga kwisisombululo se-4K, kwaye uphathe ukuya kuthi ga kwi-100W yamandla ombane, onke ngaxeshanye. Ngethuba nje ukuba zonke iimfuno zobugcisa zidibene, kunjalo. Ukuba sisinxibelelanisi sobuchwephesha obuphezulu kunye nobungqina bexesha elizayo ukuba kunjalo, i-USB Type-C inokwenzeka ukuba ibalasele phakathi kwezihlanganisi ze-USB.
Ezinye izixhobo sele zikhwele olu tshintsho. I-Apple MacBook entsha inesibuko esinye sohlobo C, esisetyenziselwa ukutshaja, ukuhambisa idatha kunye nokukhutshelwa kwevidiyo. I-Google & apos; entsha yeChbookbook Pixel inezona zibuko zombini, zombini zinamandla afanayo. Qaphela ukuba akukho zimbini kwiikhompyuter ezifuna isinxibelelanisi samandla njengoko iibhetri zabo zihlawuliswa nge-USB (ngakumbi kuloo nto).
Kwicala elisezantsi, utshintsho kuhlobo lwe-C lwe-USB luya kunika iitoni zeentambo ze-USB ezikhoyo ukuba azinamsebenzi njengoko zingenako ukungahambelani ngokwasemzimbeni nesidibanisi esitsha. Awunakho ukufaka i-Type-A okanye iplagi eMicrosoft ye-USB kwisamkelo sohlobo C. Kodwa ukwamkela ikamva kubhetele kunokuxhathisa, kwaye sicinga ngekamva apho isixhobo esiphakamileyo sohlobo C silawula izixhobo ezinikwe amandla i-USB.
Ukuthetha ngesinxibelelanisi esitsha, nazi ezinye zeentambo ze-USB Type-C esele zibhengeziwe ngumvelisi we-accessory uBelkin.
I-USB 3.1 iyakhawuleza. Ngokukhawuleza kakhulu
I-apos sele sigubungele udidi lwe-C ngokweenkcukacha, kwaye ngoku lixesha lokuba sigxile kwi-USB 3.1. Kodwa kuqala, intwana yembali. Imigangatho kunye neapos yokuqala yokubalulwa kwezorhwebo yayineqondo ledatha ephezulu ye-12 megabits ngomzuzwana, eyayanele kwiimfuno zabasebenzisi ngelo xesha. Kodwa ekugqibeleni, njengoko imfuno ye-peripherals ye-bandwidth ikhula, umda wesantya se-USB 1.x waba yibhotile ecacileyo. I-USB 2.0 izise ukonyuka okubonakalayo kumaxabiso edatha ngokukhokelela kwi-480Mbps. I-USB 3.0 ibump umda wesantya kwii-gigabits ezi-5 ngomzuzwana, kwaye ngoku, i-USB 3.1 ine-10Gbps ephezulu yedatha. Imiboniso yobuchwephesha bokwenyani ibonakalise i-USB 3.1 ifikelela kwi-7.2Gbps, ekhawulezayo ngokukhawuleza, nokuba ujonge njani.
Ngokubhekisele kwii-smartphones kunye neetafile, idatha ayizukuhamba ngokukhawuleza, nangona ingazukuhanjiswa kancinci nokuba. Masithi iiapos zakho ziplage i-USB 3.1 ehambelana nefowuni kwikhompyuter ehambelana ne-USB 3.1. Xa uqala ukukopa iifayile, idatha iya kuhamba kuphela ngokukhawuleza njengoko ikhonkco elibuthathaka kunxibelelwano lunokuyiphatha. Iya kuhlala iyikhompyuter yakho yokugcina isitoreji okanye ifowuni yakho yokugcina i-chip. Ngaphantsi kweemeko ezifanelekileyo, unokukwazi ukufumana amanani kummandla we-150 ukuya kuma-300 e-megabyte ngomzuzwana, okuphakathi kwe-30% kuphela ye-USB 3.1 enokuyiphatha, kodwa ikhawuleze ngokukhawuleza.
Ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB: zivakala njani iiwotshi eziyi-100?
Ngexesha lokukhulelwa kwayo, i-USB kulindeleke ukuba ibeyinqanawa yokuhambisa idatha, hayi amandla. Kungenxa yeso sizathu le nto i-USB 1.x kunye ne-USB 2.0 zibhalwe kwindawo ethobekileyo ye-2.5 watts (i-0.5 amps kwii-volts ezi-5) -wanele ukubiza iselfowuni ehambelanayo, kodwa ayisoloko yanele ukunika amandla into enkulu, enje ngehard drive yangaphandle. Emva koko kwafika i-USB 3.0 kwaye yaphosa imveliso kwii-watts eziyi-4.5 (0.9 amps kwii-volts ezi-5). Elo liqela elamkelekileyo kakhulu, kodwa namhlanje izixhobo zefowuni zinokuthatha ngokulula ubuncinci ubuninzi bejusi xa zibiza iibhetri zazo. Ngombulelo, abantu be-USB baphuhlise into yokujongana nale meko. Ibizwa ngokuba kukuHanjiswa kwaMandla kwe-USB.
Ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB kubekhona ngokubakho kwe-USB 2.0, 3.0, 3.1, kunye nokuchazwa kohlobo C lwe-USB. Yinto eyahlukileyo, nangona kunjalo. I-USB PD ichaza iinkangeleko ezintlanu zokuhanjiswa kwamandla-ukuya kuthi ga kwi-watts ezili-100 kwisikali-esisebenza kunxibelelwano lwe-USBngeli xeshaidatha iyadluliselwa. Ngokobuchwephesha, kukho iiapos ezintandathu kwezi profayile, kodwa into ebizwa ngokuba yiProfayili 0 yi & apos; igcinwe 'kwaye ayenzi lukhulu ngeli xesha. Ke, nazi ezintlanu ezibalulekileyo:
Iprofayile 1 - 5V @ 2A, 10W (iprofayile yokuqalisa emiselweyo)
Iprofayile 2 - 12V @ 1.5A, 18W
Iprofayile 3 - 12V @ 3A, 36W
Iprofayile 4 - 20V @ 3A, 60W
Iprofayile 5 - 20V @ 5A, 100W
Ngaphakathi kwikhebula le-C elihambelana ne-PD PD. 1 - Iplagi yohlobo C lwe-USB; 2 - i-chip yokuchonga; 3 - ukukhusela; 4 - umqhubi wombane Ngaba oku kuthetha ukuba ii-smartphones zixhotyiswe ngesihlanganisi se-C yohlobo C kunye / okanye ukuxhasa i-USB 3.1 iya kubiza ukuya kuthi ga kwi-100 watts? Ngelishwa, hayi, kwaye noluhlu olude lwezizathu. Okokuqala, i-USB PD sisikhombisi esahlukileyo, njengoko besesitshilo apha ngasentla, kwaye sinakho okanye sinokuphunyezwa kwizixhobo ezinesakhono se-USB. Kungenxa yoko le nto ukuba unezibuko lohlobo C lwe-USB kunye / okanye ukuxhasa i-USB 3.1 ayenzi isixhobo sihambelane ne-USB PD. Ukuhambelana kunye nenkcazo kuxhomekeke kuluhlu olubanzi lweemfuno zekhompyuter. Akubalulekanga kangako, ukupompa i-60 okanye i-watts zamandla kwiibhetri ze-smartphone & apos kunokubangela ukuqhuma komsi. Kwaye ayisiyonto intle leyo.
Ke, zeziphi & iiapos ezikuyo ezizixhobo eziselfowuni, emva koko? Ewe, thina & apos asiqinisekanga ngokupheleleyo okwangoku, kodwa ngokobuchwephesha kunokwenzeka ukubona ii-smartphones ze-USB PD kunye neetafile kungekudala. Kwaye baya kwenziwa ukuba basebenze ngeeprofayili zamandla asezantsi. Kuxhomekeke kubavelisi babo ukubanika inkxaso kwinkcazo yokuHanjiswa kwaMandla kwe-USB.
Kodwa linda! Ifowuni / ithebhulethi yam inetshaja esele ikhupha * faka inani elikhulu apha * ii-watts zamandla. Ngaba isixhobo sam sele sixhasa ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB?Hayi, uxolo ngokukuphoxa. Njengoko besitshilo apha ngasentla, i-USB-PD yenzelwe ukuhambisa iitoni zamandla kunxibelelwano lwe-USBngeli xeshaidatha ihamba ngapha nangapha. Itshaja yakho ibonelela nge-USB-PD-njengezixa zamandla, kodwa ayidlulisi idatha, evumele umenzi wayo ukuba athintele imigaqo ye-USB kunye neapos; umda we-0.5 / 0.9 amps zangoku.
Izinto ezimbalwa ...
Kukho ezinye izinto esifuna ukuzazi malunga nokuHanjiswa kwaMandla kwe-USB. Enye yazo ilungile, enye - hayi kangako. Iindaba ezimnandi zezokuba i-USB PD yenza ukuba kubekhona ukubamba kunye nomda wokutshintsha iindima ekunikezeleni amandla kwenye. Ngamanye amagama, kuya kuba nakho ukubiza ithebhulethi kwiLaptop kunye nokunye. Eli nqaku liya kuvumela ii-smartphones ukuba zisebenze njengeebhanki zamandla eziphathwayo zezixhobo ezihambelanayo.
Ngokuphathelele ezo ndaba zingalunganga malunga nokuHanjiswa kwaMandla kwe-USB, kukuba umgangatho ufuna intambo ebizwa ngokuba yi-Full-Featured USB. Ezi zixhobo zine-chip ekhethekileyo ngaphakathi kuzo equlathe ulwazi malunga nentambo, kubandakanya isixa samandla anokuhambisa. Isixhobo esibonelela ngombane sifunda le datha xa idityanisiwe kwaye ingahambisi watts ngaphezulu kokuba intambo inokuthwala. Iintambo ezipheleleyo ze-USB ziyafuneka xa kuthunyelwa nantoni na ngaphezulu kwe-1.5 amps okanye ii-volts ezi-5. Njengazo okanye hayi, ezi zixhobo zinokwenzeka kakhulu ukuba zibize kakhulu kunee-USB ezahlukeneyo zegadi. Kodwa amathuba okuba izixhobo ezikhuselekileyo ze-USB PD ziya kuba nenye ebhokisini.
ireferensi: I-USB 3.1, i-USB PD, kunye ne-USB Type-C yokubalula kuyo USB.org Imifanekiso ngoncedo lwe IBelkin , USB.org
Qaphela i-20 yobomi bebhetri ye-Ultra
I-Samsung Gear S2 vs Samsung Gear S2 Classic: jonga kuqala
Moto X Uhlobo vs Samsung Galaxy S6 vs LG G4: Ukuthelekiswa kweentlobo
Uluhlu lwe-Apple Watch 5 vs Series 4 kunye no-3: Yeyiphi oyifunayo?
Usenza njani ubungakanani kwakhona beWindows Window kwiWebDriver